के हो लोकतन्त्र, खतरा कहाँबाट, कोबाट ? « Naya Page
के हो लोकतन्त्र, खतरा कहाँबाट, कोबाट ?
केही साता यता नेपाली राजनीतिमा एउटा शब्द चल्तीमा आएको छ । त्यो शब्द हो, ‘लोकतन्त्र’ । दुई बामपन्थी दलहरु नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चुनावी तालमेलको घोषणा गरे लगत्तै राजनीतिक बजारमा लोकतन्त्रको ‘मुल्य’ बढाइएको हो । यसको सेयर उकालो लागेको हो । खासगरी बामपन्थी इतरका नेता, बिश्लेषक र लेखकहरुले लेख्न र बोल्न थालेका छन्,‘ लौ, लोकतन्त्रमाथि ह्रवातै खतरा बढ्यो ।’ उनीहरुको दलिल छ, ‘कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहकार्य छदासम्म सुरक्षित रहेको लोकतन्त्र एमाले र माओवादी मिल्न साथ भंयङ्कर खतरामा परिसकेको छ ।’ नेताहरुले मात्रै कहाँ हो र ? आफूलाई स्वतन्त्र र व्यवसायिक भनेर दाबी गर्ने नाम चलेका लेखकहरुले समेत बढो याचनाको भाषामा लेख्न थालेका छन्,‘लोकतन्त्र धरापमा परीसक्यो । नेपालका लोकतन्त्रवादीहरु छिटो एक हुनुहोस्ं ।’ उनीहरु बुझाईमा हामी कहाँको लोकतन्त्र यस्तो हो, ‘जो कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन हुदा सुरक्षित रहन्छ, एमाले–माओवादीको तालमेल हुदा खतरामा पर्छ ।’
लोकतन्त्र भनेको के हो ? नेपाली बृहत शब्दकोश भन्छ, ‘बहुसंख्यक जनताद्धारा छानिएका प्रतिनिधिहरुको सम्मतिअनुसार कुनै देशको शासनव्यवस्था चल्ने र नीति निर्धारण आदि हुने शासन प्रणाली नै लोकतन्त्र हो ।’ हामी कहाँको लोकतन्त्र, यसको इतिहास र अभ्यास आफ्नै छ । हामीले अहिले शब्दको परिभाषा भन्दा पनि यसको इतिहास र अभ्यास पल्टाउनु जरुरी छ । लोकतन्त्रको लागि कहिले को लड्यो ? कुन पार्टीले पार्टी भित्र र बाहिर कस्तो अभ्यास गरिररहेको छ ? हाम्रो विगत घामजस्तै छरलङ्ग छ ।
देश अहिले चुनावमा होमिएको छ । दल र तिनका उम्मेदवारहरु आफ्ना अजेन्डा सहित जनताको बिचमा जाने क्रम सुरु भएको छ । तिनका आफ्ना दलिल, सपना र योजना बताइरहेका छन् । तर, कांग्रेसका नेताहरुको चहि अहिलेको मुख्य अजेन्डा नै लोकतन्त्रको रक्षा जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । किन कांग्रेसलाई जिताउने ? ‘लोकतन्त्र खतरामा परेको छ,’ कांग्रेसका नेताहरुको उत्तर छ,‘लोकतन्त्रलाई बचाउन यसपाली कांग्रेसलाई मत दिनुहोस् ।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसका नेताहरुले यसो भन्नुको उद्देश्य स्पष्ट नै छ । तर, हामी कहाँका स्वतन्त्र र व्यवसायिकहरुले समेत यसो किन भनिरहेका छन् ? तिनले किन खतरा देखिरहेका छन् ? यो चहि बहसको बिषय हो । कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन हुदा सुरक्षित देख्नेहरुले एमाले–माओवादीको तालमेलमा किन खतरा देख्छन् ? तिनको उद्देश्य के हो ?
कस्तो कब्जा, कसको कब्जा ?
बामपन्थी इतरकाहरुले भनिरहेका छन्,‘अब एमाले र माओवादीले राज्यसत्ता कब्जा गर्छ ।’ एमाले र माओवादीले राज्य सत्ता कब्जा गर्छ या गर्दैन ? यदि गरि हाले के हुन्छ ? त्यसको बहस गर्न अघि अहिलेको राज्य सत्ता कस्तो छ ? यो बिषयमा बहस जरुरी छ । यो मुलुकको राज्य सत्ता आजसम्म उनीहरुले नै चलाएका छन्, जसले लोकतन्त्र खतरामा देखिरहेका छन् । ०४६ सालयता आजसम्म कांग्रेसले यो मुलुकको १२ पटक नेतृत्व गरिसकेको छ । अहिले पनि गरिरहेको छ । गणितमा हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले १२ औं पटक गरेर ५७ सय ४ (६ कार्तिक२०७४सम्म) दिन यो मुलुकको नेतृत्व गरेको छ । एमालेले ४ पटक गरेर १४ सय १२ दिन मुलुकको नेतृत्व गरेको छ । माओवादीले ३ पटक गरेर ११ सय २१ दिन यो मुलुकको नेतृत्व गरेको छ । राप्रपाले ४ पटक गरेर एक हजार दिन नेतृत्व गरेको छ । दरबारले २ पटक गरेर ४ सय ५५ दिन नेतृत्व गरेको छ । अन्यले १ पटक ३ सय २४ दिन नेतृत्व गरिसकेको छ ।
०४६ साल यताको अधिकांस समय नेपाली कांग्रेसले यो मुलुकको नेतृत्व गरेको छ । यसबिचमा कांग्रेसले गरेको लोकतन्त्रको अभ्यासको फेहरिस्त उल्लेख सम्भव छैन । तर, पछिल्ला केही घटनाहरुलाई हेर्दा यो मुलुकको सत्ता लगभग कब्जाको अवस्थामा नै छ । सपाट भाषामा भन्दा मुलुक भ्रष्ट र दलालहरुको कब्जामा छ । तिनको मतियार बनेका छन्, यो मुलुकको सर्बाधिक समय नेतृत्व गर्ने नै छन् । देश संबिधान अनुसार होइन ‘सेटिङ्ग’ अनुसार चलिरहेको छ । हामी कहाँका न्याय, प्रहरी, प्रशासन शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार सबै सबै तिनै ‘सेटिङ्ग’कर्ताहरुको कब्जाको अवस्था छ । यो देश त्यही देश हो, जहाँ निष्ठापूर्वक मुलुकको सेवा गर्ने नवराज सिलवालहरुलाई अपमानपूर्वक गलहत्याइन्छन् । न्यायको प्रतिमुर्ति सुशीला काकीमाथि महाअभियोग लाग्छ । तर, करोडौ भ्रष्टचार गर्ने गोपाल खड्का, चुडामणि शर्माहरुलाई अदालतले असल भन्छ । सर्वोच्च अदातलको आँगन फुलमाला र अबिरजात्रा गरिन्छ । नवराज र सुशिलाहरुले निष्ठाका साथ काम गरे बापत्त राज्यबाट अपमानित बन्नुपर्छ । राज्यलाई लुग मच्चाउने गोपाल खड्का, चुडामणि शर्माहरु सम्मानित हुन्छन् । न्यायलाय, प्रहरी र प्रशासन सबै कब्जाको अवस्थामा छ । अदालतमा न्याय पाइन्छ भन्ने कुरा त मिथक जस्तै बनिसक्यो भन्दा फरक प्रदैन । न्याय पाउने होइन किनिने भएको छ । प्रहरी र प्रशासन पनि उस्तै छ । सबैतिर सेटिङ छ । कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन हुदा सुरक्षित रहेन एमाले–माओवादीको तालमेल हुदा खतरामा देख्नेहरुको लोकतन्त्र यही हो ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यतिबेला हरेक दिन जसो भन्छन्,‘लोकतन्त्र खतरामा छ ।’ लोकतन्त्रमाथि खतरा देख्ने देउवाको विगत यो बेला कोट्उन सायद उचित होला । ०५९ संसद् विघटन गरेर प्रजातन्त्र राजालाई बुझाएपछि सत्ताबाट हटेका देउवा २३ जेठ २०७४ मा चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । देउवा यसअघि तीन पटक कसरी प्रधानमन्त्री भए ? उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला मुलुकले के–के भोग्नु प¥यो ? विगत असाध्यै धमिलो छ, अमिलो लाग्छ । संसदीय राजनीतिलाई भ्रष्ट र विकृत बनाउनमा देउवाको योगदान सबैभन्दा बेसी छ भन्दा उनीप्रति अन्याय हुनेछैन । देउवाले के गरेनन् ? वा उनको पालामा के भएन ? यहाँ त्यो लेख्दा निकै लामो हुन्छ । यति भन्न सकिएला, सत्ताको लागि नेपालको संसदमा किनबेचको संस्कृति उनलै भित्राए । केवल सत्ताका लागि कांग्रेस फुटाए । दरबारलाई प्रजातन्त्र बुझाए । सत्ताको लागि विदेशीहरुलाई हस्तक्षेपको लागि आमन्त्रण गर्ने पनि उनै हुन् । स्वार्थको लागि स्वातन्त्र न्यायलयमाथि आक्रमणको नेतृत्वकर्ता पनि उनै हुन् ।
२५ फागुन ०७२, देउवा कांग्रेसको सभापति निर्वाचत हुदै गर्दा उनीप्रति अवश्य पनि कार्यकर्ताहरुको धेरै अपेक्षा थिए । कोइराला विरासतको कांग्रेसमा देउवामा आउदै गर्दा एउटा परिवारबाट कांग्रेस निस्किएको विश्लेषण हुदै थियो । तर, यस अवधिमा जे गतिबिधि भए, जे गरिए कांग्रेसकै नेताहरुले भन्न थालेका छन्, कांग्रेस बूढानीलकण्ठ दरबारभित्र छिर्यो । कांग्रेसको लोकतन्त्र बूढानीलकण्ठ दरबार भित्र कैद भएर बस्न अभिसप्त छ । यी देउवा तिनै देउवा हुन् जसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेसलाई कोइरालाकरण गरेको भन्दै पार्टी फुटाए । तर, सभापति भएको बर्षदिन बित्दा मात्रै कांग्रेसको लोकतन्त्र बूढानीलकण्ठ दरबार भित्र छिरेको निकष्र्षमा पुगेका छन्, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर । कांग्रेसका नेताहरुका अनुसार पत्नी आरजु राणाले खुलेआम दलाली गर्छिन् । मोलतोल तोक्छिन् । पार्टीभित्रको योगदान, मुल्य मान्यता र आर्दश विस्तारै मिथक बनिरहेको अनुभुती कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा भएका निर्णय र गरिएका नियुत्तीहरु हेर्ने हो भने ती केन्द्रीय सदस्यको भनाई प्रमाणित हुन्छ । ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । मन्त्रिको नियुक्ति, राजदुत नियुक्ती, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ती, सरुवा–बढुवा यी सबैमा बूढानीलकण्ठ दरबारले गरेको सिधा हस्तक्षेपको फेहरिस्त हेर्दा जो कोही कांग्रेसीलाई सभापति देउवाको कार्यकर्ता भएकोमा हिनताबोध भएको हुनुपर्छ ।
जतिबेला कांग्रेसले शुशिला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउदै थियो । कांग्रेसप्रति सहनुभुति राख्ने सैयौं बुद्धिजिविहरुले, कांग्रेसकै हजारौं कार्यकर्ताहरुले सोधेका थिए ,‘कहाँ छ कांग्रेस ?’ प्रदीप गिरी, कृष्ण खनाल कृष्ण पहाडी, केदारभक्त माथेमा, डा. गोबिन्द केसी देखी निलाम्बर आचार्यसम्मले कांग्रेसले लोकतन्त्रको आर्दश, मुल्य मान्यता भुलेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका थिए । लोकतन्त्रमाथि उनीहरुबाटै खतरा छ, जो अहिले लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भनिरहेका छन् । राज्यलाई ‘सेटिङ्ग’मा चलाइरहेकाहरुले लोकतन्त्रको चिरहरण गरेको छ । ‘सेटिङ्ग’कर्ताहरुको कब्जामा छ, राज्यसत्ता । हो, त्यही कब्जाबाट मुलुकलाई मुत्ती दिन नेपालीजनहरुले विवेक गर्ने बेला आएको छ ।
लेखकलाई पछ्याउन :-